यी हुन् विश्वका सबैभन्दा अनौठा ८ शहर, यस्ता छन् विशेषता - Medianp
यी हुन् विश्वका सबैभन्दा अनौठा ८ शहर, यस्ता छन् विशेषता
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक २७, २०७४१०:१३0
१. कूबर पेडी, अस्ट्रेलिया
यो एक जमिन मुनि बनाइएको शहर हो । यो शहरलाई ओपल क्यापिटलको नामले समेत चिनिन्छ। किनकी यहाँ संसारकै सबैभन्दा धेरै ओपल (दुधिलो ढुंगा) निक्लिन्छ। यहाँका धेरै घरहरु जमिनमुनि नै बनाइएको छ। त्यसैले शहर दूध जस्तो देखिने ढुंगाको लागि प्रसिद्ध छ।
यो शहरमा मात्र होचा मानिसहरु बस्ने गर्दछन्। चीनमा रहेको यो शहरमा लम्बाइ ५१ इन्चभन्दा कम भएकाहरुलाई मात्रै बस्न अनुमतिछ। दिनमा यी मानिसहरु यहाँ बनाइएको अनौठो घरमा बस्‍ने गर्दछन भने रातिको समयमा बोर्डिङ हाउसमा पठाउने गरिन्छ।
उक्त बोर्डिङ हाउस उनीहरुकै लागि बनाइएको हुन्छ। तर पनि यो ठाउँलाई चीन सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको लागि विकास गरेको हो । उनीहरुले यहाँ आउने पर्यटकलाई मनोरञ्‍जन दिने गर्दछन्। यहाँका होचा मानिसहरुलाई धेरै पटक खिल्ली उडाउने गरिन्छ तर यहाँको प्रबन्धकका अनुसार यहाँको मानिसको पेशा नै यही भएको र घर यही कारणले चल्‍ने भएकाले उनीहरुलाई आफू हेपिएको महसुस हुँदैन।
३. मनसियात नसिर, इजिप्ट
इजिप्टको यो शहरमा सबैतिर फोहोरै फोहोर देखिन्छ। सडक, घर वा बाल्कोनी जताततै फोहोरै फोहोर देखिने भएकाले यसलाई गार्बेज सिटीको नामले समेत चिनिन्छ। करीब ५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो शहरमा करिब दुई लाख मानिस बसोबास गर्ने गर्दछन्। यहाँका वरिपरीका शहरहरुबाट पनि फोहोर ल्याउने गरिन्छ। किनकी यहाँ सबै फोहोरहरु पुनर्प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
जापानको यो शहरको एक भागमा ज्वालामुखि सक्रिय छ । सोही कारण सबै मानिसहरु मास्क लगाउने गर्दछन्। करिब दुई हजार बढी जनसंख्या रहेको यो शहरमा धेरै पटक ज्वालामुखी फुटिसकेको छ। सन् २०००, जुलाई १४ मा एउटा भयानक ज्वालामुखी विस्फोटन भएर यो ठाउँमा धेरै क्षति पुर्‍याएको थियो।
चीनको यो शहरमा मानिसको बसोबास नै छैन। यो शहर इंग्ल्याण्डको हुबहु कपि गरिएको छ भने लण्डनको थेम्स नदीको नाममा शहरको नाम नामाकरण गरिएको छ। यसलाई चीनको इंग्ल्याण्ड भनिन्छ।
मेरिया एलसेफाद्वारा सन् १९६८मा स्थापना गरिएको यो शहर तमिलनाडुमा अवस्थित छ। तर यो शहरको आधा भाग पाण्डिचिरेमा पनि पर्दछ। करीब दुई हजार बढी बासिन्दाहरु यो शहरमा विदेशी पनि बसोबास गरेका छन्।
यो शहरको विशेषता भनेको यहाँ कसैको पनि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति छैन। पैसालाई सबैले बराबर मिलेर बाड्‍ने गर्दछन भने यहाँका मानिसहरु कुनै पनि धर्मको मानिसलाई होच्याउदैनन। यो शहरको बीचमा एउटा मन्दिर छ सबै धर्मका मानिसहरु यहाँ आएर प्रार्थना गर्ने गर्दछ।
७. सेन्ट्रलिया, पेन्सिल्भानिया, अमेरिका
सन् १९६२ पहिले धेरै बसोबास र विकास थियो तर कोलाखानीको आगलागीले सबै बर्बाद गरिदियो । अहिले यहाँ मात्र १० जना मानिस बसोबास गर्ने गर्दछन। किनकी उनीहरु आफ्नो अन्तिम समय पनि यही बिताउन चाहन्छन्।
८. द भिलेज, फ्लोरिडा, युएसए
यो शहर मात्र वृद्धवृद्धाहरु बस्नको लागि बनाइएको हो। यहाँ १९ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिस बस्‍न पाउँदैनन्। यो शहरको नियम नै प्रत्येक शहरमा करीब ५५ वर्ष र सोभन्दा माथि उमेरका मानिस मात्र बस्‍ने छ। यति हुादाहुँदै पनि यो शहरमा द्रूत गतिले विकास भएको छ। यहाँ कुनै प्रकारका अपराधका कार्यहरु हुँदैनन। एजेन्सी
सौगात मल्ललाई किन चाहिएन अर्की ? (भिडियो)